Mialà amin'ny ekipa mpitarika ny fefy sy ny WaterBear Bolster miaraka amin'i Senior Tapery Oliver Taprogge | NAB Show News | 2020 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny Media sy ny mpamokatra ny Kat Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Ny Network Fence sy WaterBear dia mandray an'i Oliver Taprogge ho an'ny ekipan'izy ireo. Oliver Taprogge dia notendrena ho Off the Fence ho talen'ny varotra nomerika sy ny WaterBear Network ho lohan'ny fizarana.
Ny veterana indostrialy Oliver Taprogge dia mitondra 20 taona mahery any amin'ny batery fiarovana ao Amsterdam. Talohan'ny nidirany tao amin'ny Off the Fence & WaterBear Network, i Oliver dia talen'ny fizarana tao amin'ny Insight TV, nanara-maso ny fiaraha-miasa sy ny fifampiraharahana manerantany. Talohan'izay dia niasa tao amin'ny Unity Media i Oliver ho talen'ny atiny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana, amin'ny fangatahana sy ny fiaraha-miasa amin'ny atiny antoko fahatelo.
Miorina ao amin'ny foiben'ny Off the Fence any Amsterdam, i Oliver dia tompon'andraikitra amin'ny varotra Off the Fence momba ny fangatahana (VOD) manerantany ary hanara-maso ny paikadim-bola fizarana nomerika an'ny WaterBear Network izy ary hifampiraharaha manerantany.
Stefanie Fischer, Tale mpitantana ny varotra, eny ivelan'ny fefy Hoy izy: “Faly aho mandray an'i Oliver amin'ny ekipa. Izy dia mitondra traikefa sarobidy be dia be ary ho fananana ho an'ny orinasantsika mitombo. Manantena ny fanitarana ny fahazoana nomerika manerantany izahay. ”
Oliver Taprogge dia nilaza hoe: "Faly aho miditra amin'ny ekipa Off the Fence and WaterBear Network. Ny fahafaha-manao nomerika manerantany dia mivelatra amin'ny taha exponential ary antenaiko ho anisan'ny tambajotra mitombo mifantoka amin'ny fizarana nomerika. ”
Momba ny fefy:
Off the Fence dia orinasam-panoratan-kaonty tsy foronina amin'ny maridrefy sy ny zava-bita manerantany, mamokatra sy mizara fandaharana tena misy. Tompon'ny orinasa ZDF nanomboka tamin'ny taona 2019, ary naorina tamin'ny taona 1994, Off the Fence dia orinasa afa-po miisa 360. OTF mamolavola, mamatsy vola, mamokatra ary miara-mamorona programa tsy famoronana iraisam-pirenena amin'ny karazana karazana ao anatin'izany ny History Natural, Science, Travel & Adventure, Lifestyle, History, People & Culture, Crime and Feature Docs.
Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho azafady www.offthefence.com na mifandraisa amin'i Jennifer Kemp -
+44 203 457 2978 - [email voaaro].
Momba ny WaterBear:
WaterBear no tamba-jotra voalohany amin'ny karazany: horonantsary fifandraisana maimaim-poana sy sehatra nomerika natokana hanohanana ny tanjon'ny fampandrosoana maharitra UN. Izy io dia manao izany amin'ny alàlan'ny atiny manentana ny fanahy, ny haitao manify izay manamora ny hetsika ary amin'ny alàlan'ny tambajotran'ireo mpiara-miasa manerantany. Manome hery manokana ny mpijery mba handray andraikitra mivantana eo noho eo hanohanana ireo ONG manerantany ary hamolavola ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny planetantsika marefo.
Previous: Telstra dia manamafy ny fisian'ny media manerantany amin'ny alàlan'ny PoP sy fiaraha-miasa vaovao
Next: Whitman dia manazava ireo teboka misy kodiarana mafana miaraka amin'ireo fanavaozana jiro BB&S